トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Hanemono OK amin'ny sisin-taniny teorian'ny?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, satria maro no navoakan'ny gazety pachinko, vaovao toy izany dia lasa mora ny hiditra ny tanana. Noho izany, raha toa ilay olona izay namely ny pachinko, indray mandeha, dia think're te mahita izay nahita hoe teoria sisin-tany.
Eto, ny fari-taniny teorian'ny, Te-hijery. Voalohany indrindra, eo anatrehan'ny tantara ny sisintany teorian'ny, misy zavatra izay voalaza fa Tsipiky ny sisintany. Ny pachinko milina, misy lehibe hira mety, tsirairay avy. Ary ny fari-tsipika, raha ny jackpot amin'ny jackpot mety arabe ny milina, ny vola dia cashed ny vola sy ny fampiasam-bola payout izay, dia milaza fa ny sampana ho Plus teboka na Miiba 0.
ao amin'ny raharaha pachinko dia, io fari-tsipika, ny lehibe sy ny hira mety mifampiresaka Chang tahan'ny, sns, indray kajy avy isan-karazany isa soatoavina, dia aseho ho toy ny isan'ny revolisiona ny arivo Yen. Pachinko milina dia, sy mivoaka, na tsy mamerina avy, dia afaka mba converge ny jackpot mety izay efa napetraka.
Noho izany, namely ny fari-tsipika na mihoatra maty izay efa napetraka isaky ny milina, rehefa mba converge ny voatendry jackpot mety ny milina, satria izany no soa, 's ny hevitra momba ny teorian'ny sisintany.
tokoa, ara-teorika, saingy mino aho fa ho tonga izany, tsy any raha ny marina ny manao izany tsara. Aho niresaka momba ny antony, pachinko parlors efa nentina nivoaka fantsika nanitsy ny fivarotana. Pachinko parlors ianao dia fantsika fanitsiana ny sisin-dalana, arabe, dia toa tsy misy tany am-boalohany.
raha misokatra fantsika manodidina tokoa ny voalohany, rehefa mieritreritra na misy ihany koa any an-dafin'ny sisin-tany, sns Raha toa ianao ka tightened fantsika fanitsiana ny manodidina ny mpanafika, efa nanitsy, toy ny fikikisana ny baolina dia, na dia be manomboka manodidina, hampihenana ny payout dia ho haingana kokoa. Raha ny
ny payout rehetra, dia manokatra fotsiny ihany no fihantonana eo amin'ny et? amin'ny manodidina ny voalohany, dia ho lasa zavatra tsy ampy. Mba manao izany sisin-tany teorian'ny, dia nanao fandaharana ao amin'ny nitarehin-birao, dia mijery ny fantsika rehetra fanitsiana, Mampihena ny baolina Mila mifidy latabatra kely.
araka izay azo atao ny nandrasana hatry ny ela ny baolina, tsy hampihenana, raha tsy milentika ny manaraka lehibe hira, fa raha mijery ny tontalin'ny amin'ny mizana ny vola, dia tonga ny ratsy, satria ny sisin-teorian'ny dia tsy afa-po.
, na izany aza, dia ny an'ny pachinko hametraka ity teorian'ny sisintany amin'ny lohako, mba hahazo Heveriko fa tena mahomby. Ho an'ny pachinko dia amin'ny fotoan'ny convergence ho any amin'ny lehibe hira azo inoana, mba hahazoam-bola dia ny isa ilaina ny tsy misy il?na azy ary tsy miala amin'ny arivo be izao Yen ny ambany indrindra.
mba hitari-dalana ny rotational hafainganam-pandeha, raha toa isika misafidy ny sehatra, noho ny an-jambany hitifitra Mino aho fa ny vokatra azo dia tsara iray. Mba mampihatra ny fari-taniny teorian'ny, mba haka ny fotoana, tokony hanangona ny angon-drakitra koa nanao nandritra ny fotoana lava be.
Na dia izany aza, satria ny hira ao amin'ny teoria, dia mety ho fa misy mendrika ny hanandrana.